Ingiriiska oo Soomaaliya ka dhisaaya Xabsi iyo maxkamad lagu qaado dacwooyinka Argagixisada iyo kooxaha Burcad badeeda Soomaalida. | Salaan Media
Ingiriiska oo Soomaaliya ka dhisaaya Xabsi iyo maxkamad lagu qaado dacwooyinka Argagixisada iyo kooxaha Burcad badeeda Soomaalida.
Dowladda Ingiriiska ayaa wada qorshe ay ku doonayso sidii Soomaaliya looga hirgelin lahaa nidaam sahlaya qaadista dacwadaha burcadbadeedda iyo argagaxisada, kuwaasoo badi ku jira xabsiyo ku yaala dalalka calaamka.
14 milyan oo Pound ayay Dowladda Ingiriiska ku bixinaysaa dhismaha xabsiga weyn ee magaalada Muqdisho iyo maxakamdo dambiyada qaada, si loogu maxkamadeeyo kuwa lagu helo falalka la xiriira Burcadbadeednimada iyo argagaxisada.
Justline Greening Wasiirradda horumarinta caalamaiga ah ee Ingiriiska ayaa u sheegtay warbaahinta in dalkeedu uu diyaar u yahay bixinta lacag dhan 14 milyan oo Pound si Soomaaliya dib loogu dhisaayo xabsiga weyn ee Muqdisho iyo sameynta maxkamadda dambiyada oo noqon doonta mid guur guurta.
Wasiirradda horumarinta caalamaiga ah ee Ingiriiska waxay sheegtay in ujeedkoodu yahay in la helo nidaam sahlaya qaadista dacwadaha ka dhanka ah burcadbadeedda iyo argagaxisada, iyadoo sheegtay in qorshahoodan ay ku dhisayaan xabsiyada ay qayb ka tahay inay Soomaali fara badan oo xabsiyada dalkooa ku jira ay dib ugu celiyaan Soomaaliya si halkaas loogu xiro.
Dhinaca kale wasiiraddu waxay sheegtay in qorshahooda ugu weyn uu yahay inay dayactir xooggan ku sameeyaan xabsiga weyn ee Muqdisho oo dhisme ay ugu dambeysay 180-sanno ka hor, waxayna sheegtay Wasiiradu in xabsiyada dalka Ingiriiska ay ku jiraan maxaabiis gaaraysa ku dhawaad 400-qof oo Soomaali ah.